Ugu yaraan saddex qof oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan saddex qof oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso
May 23, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay caawa oo talaado ah fiidkii gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ee Puntland, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka iyo dadka deegaanka.
Qaraxa ayaa sidoo kale sababay tiro kale oo dhaawac ah, sida saraakiil caafimaad oo jooga Boosaaso ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxa ilaa iyo hadda.
At least three killed in Bosaso blast
Burcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay dooni kalluumaysi oo Iran laga leeyahay si ay ugu ugaarsadaan maraakiibta ganacsi
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa maanta oo Talaado ah lagu wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya. Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha ciidamada Daahir Aadan Cilmi oo loo yaqaan Indhoqarshe ayaa maanta [...]